Android 2.3.6 Gingerbread amin'ny Nexus S sy ny fiheveran'ny mpampiasa | Androidsis
Android 2.3.6 Gingerbread amin'ny Nexus S sy ny fiheveran'ny mpampiasa voalohany
Fabio | | Finday, Tutorials, Android Version
Azo inoana fa efa namaky ianao fa ny orinasa Google dia namoaka fanavaozana vaovao ny kinova Gingerbread an'ny rafi-piasa finday Android. Android 2.3.6 izy io ary, araka ny nampoizina, ny smartphone voalohany nahazo ity fanavaozana ity dia ny Nexus S.
Araka ny hafatra navoaka tao amin'ny forum Google Mobile Help avy amin'ny Community Manager Paul Wilcox, ity fanavaozana ity dia manana tanjona lehibe hamahana ireo olana sasany izay misy fiatraikany amin'ny serivisy Search Voice amin'ny finday Nexus S. ary misy toetra kely hafa ihany koa izay mbola tsy natoraly .
Na izany aza, raha ny fanehoan-kevitr'ireo mpampiasa sasany izay efa nametraka Android 2.3.6 Gingerbread amin'ny Nexus S azy ireo, ny fanavaozana dia amin'ny tranga sasany dia antony iray nampitondra fahasarotana ny hadisoan'ny Voice Search.
Raha ny tena manokana, ny tatitra sasany dia manondro fa ity kinova Android ity dia nanimba ny fiasa namboarina. Raha ny filazan'ireo mpampiasa nandray anjara tamin'ity fanehoan-kevitra ity niaraka tamin'ny forum fanampiana Google, amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny Wi-Fi sy USB tethering, ny fifandraisana 3G dia arian'ny smartphone Nexus S mandra-pihodinanan'ny tethering.
Raha misy mpamaky manana fampahalalana bebe kokoa na nanandrana Android 2.3.6, dia mahaliana ny mizara amin'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo Androidsis ny zavatra niainanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Android 2.3.6 Gingerbread amin'ny Nexus S sy ny fiheveran'ny mpampiasa voalohany
niwaldox dia hoy izy:
Izany no mitranga amiko rehefa ampifandraisiko ny fametahana usb na ny fanidiana USB, manjavona ny fifandraisako 3g ary raha ajanoko ny fanidiana USB dia hiverina indray ny pc. Na izany na tsy izany, taorian'ny nahavaozako ny zava-drehetra dia tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiambenana, arahaba avy any Silia
Mamaly an'i niwaldox
shery sambora dia hoy izy:
Amiko ihany koa, hatramin'ny nanavaozana azy dia tsy mandeha amin'ny laoniny izy io, manome ahy olana amin'ireo horonan-tsary noraketina tamin'ny fakan-tsary sy YouTube. Miverina ihany koa ny tenany. Inona no azoko atao? 🙁
Mamaly an'i shery sambora
Amiko ihany koa, hatramin'ny nanavaozana azy dia tsy mandeha amin'ny laoniny izy io, manome ahy olana amin'ireo horonan-tsary noraketina tamin'ny fakan-tsary sy YouTube. Miverina ihany koa ny tenany. Inona no azoko atao?
rachi dia hoy izy:
tena ratsy gingerbread 2.3.6, Bluetooth tsy mandeha tsara amin'ny Nexus S
amin'ny kinova eo alohako ny zava-drehetra Ok, na dia tsy nanandrana ny tethering an'i usb yes tamin'ny wifi aza aho ary nahomby tsara izany, nahafinaritra ny fikarohana ny feo, ary ny Bluetooth
manatsara hatrany, raha fantatro fa tsy ho avy aho
Mamaly an'i rachi
Napetrako androany ary tsy hitako izay olana! Nampiasako ny sela ara-dalàna ary tsy miverina izy na inona na inona ... Tokony hiezaka ny usb izay hazavainao sy ny Bluetooth aho. Fiarahabana avy any Silia koa 😉
manoroka- dia hoy izy:
Ny galaxy mini-ko efa misy 2.3.6 an'ny Gingerbread nanavao izany tamin'ny alàlan'ny KISS ary nisy fahasamihafana kely teo amin'ny fifanakalozana kely fotsiny.
Basketballeduardo dia hoy izy:
Salama maraina, mitady rindrambaiko mpitam-peo izay tiako apetraka amin'ny findaiko aho. Huewei na 8652 miaraka amin'ny rafitra android io, nefa satria lafo dia tsy nahita fampiharana na inona na inona karazana izay afaka manampy ahy misintona ny fampiharana. aten eduardo Guatemala
Valiny tamin'i Basketballeduardo
Sony Ericsson Xperia Play 4G, avy amin'ny tanan'ny AT&T